XASAASI: Lionel Messi Oo Shuruud Adag Ku Xidhay Heshiis Kordhintiisa Kaddib Ceebtii Barcelona & Tababaraha Ay Dalbadeen Xiddigaha Kooxdu - Gool24.Net
XASAASI: Lionel Messi Oo Shuruud Adag Ku Xidhay Heshiis Kordhintiisa Kaddib Ceebtii Barcelona & Tababaraha Ay Dalbadeen Xiddigaha Kooxdu
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa lagu soo warramayaa inuu dalab deg deg ah ka codsaday madaxda sarre ee kooxdiisa kaddib fadeexadii xalay ka gaadhay Bayern Munich xilli ay ciyaaryahanada kooxdu tababare gaar ah doonayaan.
Daafaca dhexe ee Gerard Pique oo kamida kabtan ku xigeenada kooxdaas ayaa ciyaarta kaddib codsaday in isbedel weyn la sameeyo isla markaana uu isaga qudhiisu baxayo haddii ay ka fursan weydo inuu baxo si kooxda dib loogu dhiso.
Si lamid ah Pique, qaar kamida xiddigaha waaweyn ee Blaugrana ayaa diyaar u ah inay kooxda iskaga tagaan haddiiba ay ka caawinayso in dib loosoo dhiso oo dhiig cusub lagu shubo.
Codsiga uu Lionel Messi doonayo kaddib ciyaartii bahdilaada ahayd ee xalay ayaa ah in si deg deg ah loo qabto doorashada madaxweynenimo ee kooxda kaddib shaqada Josep Maria Bartoemu uu hadda halkaas ka hayo oo u muuqata mid fadhiid ah.
Sida uu sheegayo il-wareedka COPE ee caanka ka ah Spain, Messi ayaa u sheegay madaxda sarre ee Barca inay qabtaan doorashada madaxweynenimo haddii kale uusan wax heshiis kordhin ah samayn doonin maadaama qandaraaskiisu 2021 dhacayo.
Wararka ayaa intaas ku daraya in gudaha qolka labiska ee Barcelona tababaraha laga doonayaa uu yahay halyeeyga kooxdaas ee Xavi Hernandez oo hadda maamula kooxda Al Sadd.
Xiddigaha Barcelona ayaa dareemaya in loo baahan yahay in la helo tababare hoggaamiye ah oo garanaya hanaanka ciyaareed ee dhaqanka usoo ahaa kooxdooda isla markaana leh shaqsiyad uu salka hoose kaga soo dhiso kooxda.
Ugu dambayn, ciyaaryahanada Barca ayaa rajaynaya in madaxweyne Bartomeu uu yeelan doono geesinimada uu hadda ku qabto doorasho jagadiisa ah oo uu kasoo hor mariyo sanadka 2021 ee la balansan yahay.